Fikaonan-dohan’ny minisiteran’ny Fitsarana: ho tonga hatrany amin’ny fanamelohana ho faty ny fanolanana | NewsMada
Mbola eny ambony latabatra aloha fa iandrasana vokatra mivainga. Mikaon-doha eny Ambohimanambola, hatramin’ny rahampitso ireo mpitsara miisa 138 manerana ny Nosy. Anisan’izany ireo miandraikitra ny raharaha momba ny herisetra mianjady amin’ny maha lahy na ny maha vavy. “Misy fidinana ifotony ataon’ny minisitera ho fanamafisana ny ady. Hapetraka ny tanjona fohy sy lavitra ezaka manoloana io herisetra sy fanolanana ankizy tsy ampy taona io”, hoy ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Fitsarana, Imbiky Herilaza, omaly. Notsiahiviny fa efa nisy ny toromarika hahafahana mametraka ireo mpitsara manerana ny faritra hiandraikitra izany ady izany.
Fanamelohana ho faty amin’ny fanolanana
Hisy koa ny fivoriana momba ny heloka bevava sy ny herisetra. Ho avy ny fanentanana any amin’ny faritra ny amin’ny hanovana ny toe-tsaina sy ny fitondran-tena ary ny fametrahana ny fanenjehana sy fanasaziana, araka ny nambarany. Nanteriny fa tsy tokony hatahotra amin’ny fitorohana ny rehetra satria efa mihanaka ny raharaha ary ho tonga hatrany amin’ny fanamelohana ho faty io resaka herisetra sy fanolanana io. “Anisan’ny anton’io herisetra io ny zava-mahadomelina, ny resaka toe-tsaina. Eo koa ireo tokony hiteny nefa tsy sahy”, hoy ihany izy. Nanentana ny mpitandro filaminana ny fitsarana mba hitondra ny antontan-taratasy feno rehefa eny amin’ny fitsarana, hahafahana mitsara araka ny tokony ho izy.
Fitsarana manakaiky vahoaka
Tafiditra amin’izao atrikasa izao koa ny famolavolana boky mampahafantatra ny asan’ny fitsarana, tafiditra amin’ny politikan’ny minisitera amin’ny fametrahana ny fanjakana tan-dalàna. Eo koa ny fiarovana ny zo.
Tsiahivina fa anisan’ny miatrika izany ireo mpitandro filaminana, ny mpisolovava ary ny fiarahaomonim-pirenena. Hifantohan’ny dinika amin’izany ny fitsarana manakaiky vahoaka sy natao ho an’ny rehetra. Hihainoana sosokevitra izany ary havadika ho boky. Haparitaka ahalalan’ny rehetra ny dingana atao eny anivon’ny fitsarana sy ireo torolalana samihafa manodidina izany.